I-chat roulette - ingxoxo yevidiyo enhle kakhulu yokuphola nokuxhumana
Namuhla le ngxoxo iyindlela eyingqayizivele nenesithakazelo yokunqoba ukwesaba namahloni, uthole abangane, uqale ukuxhumana, obajwayele, futhi uqale ubuhlobo. Manje asikho isidingo sokubhala izinhlamvu ezimnyama esikrinini esimhlophe, akunangqondo ukuchitha isikhathi esiningi ekukhetheni okukhethiwe kwemishwana, ngoba ingxoxo yevidiyo ivula izici ezihluke ngokuphelele. Udinga nje ukuvula ikhompyutha yakho bese uya kuGooglme, nakho konke okunye kuyindaba yenhlanhla. Okucacile kwale sevisi ukuthi uzohlala uxhumana nomuntu ongamazi. Ubuqili obunjalo bujabulisa ingqondo futhi buvuse isithakazelo, ingxoxo ngayinye ingumngane omusha, ingxoxo efundisayo.
Izingxoxo ezithakazelisayo, izingxoxo ezinde zikulindile, uzothola lapha abantu abaningi abahlukene, ukuxhumana, obajwayele, futhi mhlawumbe omunye wabo uzophenduka okunye. Khumbula ukuthi yonke intombazane iyimbangi efanele inhliziyo yakho. Lapha wonke umuntu uthola lokho akufunayo.
Ingxoxo yevidiyo - ukuphola okungajwayelekile
Inzuzo enkulu futhi enkulu yesayithi ukuthi awusoze wazi ukuthi umuntu omusha omaziyo uzokwenzeka nobani, ikholi yevidiyo. I-chatroulette engajwayelekile, ngokuzikhethela okungajwayelekile, izokutholela umuntu ozokhuluma naye, ikunikeze ukuxhumana, ojwayelene nabo nolwandle lwemizwa emihle. Izingxoxo ezinjalo zihlala zingavamile, zifundisa abantu ukuthi bavule futhi bakhululeke, bakwazi ukuzivumelanisa ngokushesha nezimo.
Le ngxoxo ye-roulette ayifani nabo bonke abanye, ngoba ungaqala izingxoxo nganoma yisiphi isikhathi esivumelana nawe. Akunandaba ukuthi ingxoxo yenzeka nini emini noma ebusuku, uzohlala uthola okhulumisana okungahleliwe. Lapha uzothola abantu obajwayele abasha abangashintsha impilo yakho ngokuphelele. Umngane ongalindelekile nolwandle lwemizwa eyakhayo - yilokho okulindele wena uma uvakashela ingxoxo yethu, evulekele wena ngokuphelele mahhala.
I-Googlme ilula futhi iyashesha!
Njengesikhumbuzo, iGooglme yingxoxo ethuthukisiwe, lapho konke kulula kakhulu futhi kuyashesha. I-interface yomsebenzisi-friendly izokusiza ukuthi uzulazule kuyo yonke into kalula. I-database inezigidi zababhalisile abasebenzisa ingxoxo njengendlela engcono yokwenza izingcingo. Kepha okubaluleke kakhulu ukuthi akudingeki ubheke umuntu ongajabula ukukhuluma naye, ingxoxo yewebhu izokukhethela. Ku-chatroulette konke kwenziwa kufinyeleleke ngangokunokwenzeka, okuyinzuzo ebaluleke kakhulu.
Kwenze ngekhamera yakho yewebhu
Abantu abaningi bacabanga ukuthi ingxoxo enjalo ayikwazi ukumiselela ukuxhumana kwangempela, kepha impendulo evela kubahlanganyeli iqinisekisa okuthile okuhluke ngokuphelele. Kulokhu, i-Intanethi izokuvumela ukuba usondele kakhudlwana, muva nje, kumuntu ongamazi kahle kangangokuba uzomuzwa esondelene kakhulu.
- i-intanethi esheshayo, ezovula ukufinyelela emhlabeni;
- ikhamera yewebhu ejwayelekile, okuyithuluzi eliyinhloko lale nsizakalo;
- isifiso sakho sokuthola ukuxhumana, obajwayele nabangane abasha.
Ukuxhumana okutholayo lapha ngeke kukukhohlwe, ngeke kube okujwayelekile, futhi umxhumanisi ngeke akuvumele ukuthi ukhulume nje kuphela, kepha futhi ufunde nezinto eziningi zokuqonda. I-roulette yengxoxo yevidiyo esezingeni eliphezulu futhi eluthayo izokufundisa ukuthi uvuleke, ikuphuce izakhiwo.
Ungahle uzibuze ukuthi kungani ukuxoxa ngokungahleliwe - impendulo lapha ilula - ingxoxo yesimanje ehlose kuphela ukuxhumana okuhle nezingxoxo ezimnandi. Akukho ukukhohlisa lapha, ngoba abantu bangempela babamba iqhaza ezingxoxweni. Le ngxoxo iqeda bonke ubunzima futhi ikunikeze okuhle. Ayikho into enelukuluku njengokwenza lolu hlobo lokujwayelana nokuthola abantu abathandekayo.
Ikhamera yakho yewebhu izokuvulela amathuba, futhi amakhono akho obuhlakani nezokuxhumana azoba ukhiye wamakholi wevidiyo aphumelelayo. Ngokuqinisekile bonke abangane abasha bangaba yisikhathi eside, mhlawumbe lokhu kuzohlala kungubungane, noma mhlawumbe uzohlangabezana nesiphetho sakho. Sithanda ukukukhumbuza ukuthi konke kungenzeka ku-chatroulette, ngakho-ke akufanelekile ukukhipha lokhu kungenzeka. I-roulette yethu ngekhamera ingaba ithuluzi elizokunikeza ukumangala okukhulu, ngoba intombazane kungenzeka kube yiyo kuphela obuyifuna.
Kuphela kuGooglme, wonke umfana nayo yonke intombazane inethuba lokuhlangabezana nothando lwayo. Kunokuqondana okuningi nokuhlukile engxoxweni yevidiyo engahleliwe, kwesinye isikhathi ukudumazeka, kepha ukuxhumana akukhona njalo okujwayelekile kakhulu. Okungenakuphikwa, noma kunalokho, inzuzo enkulu ukuthi ingxoxo yevidiyo emhlabeni wonke ingumsebenzi omusha futhi othakazelisayo kuwo wonke umuntu.
Ukuqomisana okungcono kakhulu online!
Ngakho-ke, namuhla uvulelwe i-webchat ethakazelisayo, engafani nezinye izinsizakalo. Uma ubufuna ingxoxo yevidiyo yamahhala, iGooglme iyindlela engcono kakhulu. Ngokusebenzisa i-chatroulette uzokwenza ucingo oluthandekayo ngaso sonke isikhathi, nihleke ndawonye, ​​nifunde imininingwane eminingi ewusizo. Awudingi ukuyilanda, ngoba isondo le-roulette linquma ukuthi uzoxhumana nobani, empeleni, ngemizuzwana embalwa, intombazane enhle izovela esikrinini ikunikeze ukumamatheka. Ngemuva kwalokho uzoqala ukuxhumana, ukhethe isihloko sengxoxo, uqale ukwazana. Ukukhetha okusheshayo nokungahleliwe kuzophumelela kakhulu, futhi uzokhohlwa ukuthi ubamba iqhaza kwi-roulette yengxoxo, ibanga lizosulwa.
IGooglme izoba yinsindiso yakho ekudinweni nasebusuku obudabukisayo
Manje awudingi ukuthi ukhathazeke ngokuthi awunamuntu ongakhuluma naye, ingxoxo izokuvula isikhala esisha ngokuphelele nge-Intanethi. Kuhlala kukhona umuntu okhulumisana nawe, i-roulette izomkhetha, futhi uzokhipha isizungu esinzima kuwe. Kuphela ku-analogue Chatroulette yethu lapho uzokwazi khona ukuqonda ukubaluleka kwezingxoxo nezingxoxo.
Amagumbi okuxoxa okuqala avela ku-Inthanethi eminyakeni engaba ngu-30 edlule. Lo mkhuba ububangelwa ukungabikho kwamathuluzi we-elektroniki atholakalayo wokuxhumana phakathi kwabantu. Isibonelo, i-imeyili kanye nezithangami azikuvumeli ukuthokomala kokuthumela imiyalezo nge-interlocutor. Kodwa-ke, izingxoxo ngokuhamba kwesikhathi zaqala ukuphulukana nezivakashi zabo, ngoba ngokwakhiwa kobuchwepheshe bolwazi, ukuxhumana ngemibhalo akukwazanga ukwanelisa iningi lezidingo zabasebenzisi balezi zinsizakalo.
Ngakho-ke, abahleli bohlelo benze i- roulette yokuxoxa ngevidiyo, evumela hhayi kuphela ukuxhumana nokubona i-interlocutor ngesikhathi sangempela, kepha futhi inezinye izinzuzo eziningi uma kuqhathaniswa nengxoxo yombhalo ejwayelekile. Namuhla, izingxoxo zevidiyo ziya ngokuya zithandwa kakhulu.
Yini i-roulette yengxoxo (ingxoxo yevidiyo)?
I-roulette yengxoxo iyisevisi ekhethekile kwi-Intanethi, ngenxa yokuthi kunikezwa ukuxhumana ngevidiyo nabantu abahlukile abavela emhlabeni wonke. Isici esiyinhloko esihlukanisa ingxoxo ye-roulette ukuthi lapha abasebenzisi abakwazi ukukhetha abalingani babo ukuxhumana.
Insizakalo ithola i-interlocutor yomsebenzisi ngamunye ngokulandelana okungahleliwe. Kungukukhetha okungahleliwe kwe-interlocutor okudlala indima ebalulekile, kudala ulwandle lwemizwa nokungeza i-adrenaline kubasebenzisi bensizakalo.
Xoxa roulette uxoxe namantombazane online
Kulezi zinsuku, kunzima kakhulu kwabanye abafana abancane, kanye nabesilisa abadala, ukuthola abalingani babo bomphefumulo. Iningi lamantombazane esimanje lifuna ukuthola umfokazi ongahleliwe ongasombulula ngokushesha ezinye zezinkinga zakhe zezinto ezibonakalayo.
Ngakho-ke, namuhla, kunanini ngaphambili, kuyafaneleka kwabesilisa ukuxhumana namantombazane engxoxweni ye-roulette. Lapha ngeke babe bodwa futhi bazokwazi ukusebenzisa isikhathi sabo ngokuthokozisayo, ukuxhumana nabathintekayo abathandekayo. Empilweni yangempela, abesilisa kudingeka benze umzamo omkhulu wokuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuxhumana nowesifazane ngokuzayo.
Ngaphezu kwalokho, owesifazane udinga ukunikeza izimbali, ahambe naye ezindaweni zokudlela noma kumabhayisikobho, ambheke njalo, futhi avame ukukhokha izimpawu ezingavamile. Ingxoxo yevidiyo eku-inthanethi iqeda ngokuphelele ubunzima obunjalo, futhi indoda ingaqala ngokushesha ukuxhumana namantombazane nabesifazane abahlukile.
Kwabesilisa nabafana abancane, lapho kukhulunywa nobulili obufanele engxoxweni ye-roulette, ngeke kulimaze ukukhombisa umhlaba wakho ocebile wangaphakathi, futhi kube okungajwayelekile, ngenxa yalokho ongathakazelisa ongena kukho ekukhulumisaneni okuqotho nokuthakazelisayo.
Xoxa roulette lapho ungabonisa konke
Ukuba khona kwekhamera yedijithali lapho uxoxa kunezela amathuba amaningi amasha. Ukuxhumana ngokubuka kuthakazelisa kakhulu kunokusebenzisa imininingwane yombhalo. Uma unentshisekelo kulowo oxhumana naye, uzokwazi ukukubonisa imininingwane yegumbi noma indawo akuyo manje. Indlela efanayo ingasetshenziswa ohlangothini lwakho uma unentshisekelo ku-interlocutor.
Kunezindlela ongadlala ngazo Prank kumlingani wakho wengxoxo. Kulokhu, kusetshenziswa isoftware ekhethekile, ethumela ividiyo elungiselelwe ngaphambilini kwikhamera yedijithali.
Ngenxa yalezi zenzo, ungashiya umbono ongalibaleki. Isibonelo, inganyamalala ngokungabonakali emkhakheni wokubona noma iphenduke isilwane, njengekati noma inja. Ungazenzela amahlaya akho asebenzayo usebenzisa indiza yefantasy. Abasebenzisi be-roulette yengxoxo abanolwazi banamaqhinga amaningi afanayo athakazelisayo ku-arsenal yabo.
Inzuzo ye-roulette yengxoxo
Ingxoxo yeRoulette inikeza abasebenzisi bayo ngezinzuzo ezilandelayo:
Ukushintshaniswa okubonakalayo kolwazi;
Ukukhetha okungahleliwe kwe-interlocutor;
Amandla wokuyeka ukuxhumana ne-interlocutor nganoma yisiphi isikhathi;
Ijografi ebanzi yabasebenzisi bezinsizakalo ze-Intanethi;
Isimo esikhululekile nokusebenza okunethezekile;
Ukuntuleka kwenqubo ende yokubhalisa yabasebenzisi bezinsizakalo;
Ukutholakala okusheshayo kuqala ukuxhumana.
Ngaphezu kwezinzuzo ezingenhla, noma imuphi umsebenzisi we-roulette yengxoxo uthola futhi athuthukise amakhono akhe okuxhumana emphakathini. Uyazikhethela yena ukuthi yiluphi ulwazi olungabiwa kumuntu osebenzisana naye, nokuthi yiluphi ulwazi okungafanele alunikeze. Ukuxhumana nabantu abahlukahlukene kukuvumela ukuthi uqonde okushiwo yizintshisekelo zabo, futhi ujwayelane nezici eziningi zamasiko abo nokuziphatha kwabo.
Ukusetshenziswa okusebenzayo kwale nsizakalo kungahluka. Abanye abantu bafuna abangane, abanye bafuna enye ingxenye yabo, kanti abanye abanakho ukuxhumana. Ngaphandle kwezinhloso ezahlukahlukene zokugcina, ukuxhumana okunjalo kokugembula akubandakanyi imiphumela emibi, kepha kunalokho kukhulisa ngokuphelele amandla okuxhumana.
Uma ufunda izilimi zakwamanye amazwe, ukuxoxa ngesondo le-roulette kuzoba enye yezindlela ezingcono kakhulu ezizokusiza ukuzijwayeza ukukhuluma lolu limi ngaphandle kokuhambela kwelinye izwe.
Ukunakwa! Njengasempilweni ejwayelekile, abakhohlisi bangahlangana engxoxweni ye-roulette abafuna ukusebenzisa imininingwane yakho noma eminye imininingwane, ukuze bathole intshisekelo yabo ngendlela yemali noma okunye okuhle kubo. Ngakho-ke, umsebenzisi wengxoxo ye-roulette uyanconywa ukuthi angashintshi imininingwane ebalulekile nabantu abakhulumisana nabo okungekho themba eliphelele kubo.
I-roulette yengxoxo iyashesha futhi kulula
Ukuze ube ngumsebenzisi we-roulette yengxoxo futhi uxhumane ngokukhululeka kuyo, kufanele ube nokulandelayo:
Ukufinyelela kwe-Inthanethi ngesivinini esikhulu;
Ikhompyutha noma i-laptop yomuntu uqobo;
Esikhundleni sakho konke lokhu okungenhla, ungasebenzisa i-smartphone yesimanje ene-inthanethi esheshayo.
I-roulette eku-inthanethi ikuvumela ukuthi uqale ukuxoxa ngendaba yemizuzwana. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuya ku-Intanethi kusevisi bese ucindezela inkinobho ethi "Qala". Ngemuva kwalokho, uhlelo ngaphakathi kwemizuzwana embalwa luzokutholela isikhulumi esingahleliwe, futhi uzoqala ukuxhumana naye.
I-roulette yengxoxo yevidiyo - ukuphola okungajwayelekile
Abasebenzisi bengxoxo yevidiyo ngabantu abafuna ukuzijabulisa futhi bathole imizwa eminingi emihle. Ukungalindelekile kwesimo nomphumela waso kunikezwa ngenxa yokukhetha okungahleliwe kwe-interlocutor ngohlelo.
Ngasikhathi sinye, okhulumisana naye angavela kwelinye izwe futhi akhulume ulimi ongalwazi. Ngomxhumanisi onjalo, ungaxhumana usebenzisa ukushukuma komzimba noma usebenzisa izinhlelo ezikhethekile zokuhumusha.
Kuyinto elula hhayi kuphela ukujwayelana, kodwa futhi nokuvalelisa
Ukunethezeka kokuzilibazisa okumnandi ku-roulette yengxoxo yevidiyo akubonakaliswa nje kuphela ngesivinini esikhulu sabantu obajwayele, kodwa futhi nasekhonweni lokuphazamisa ingxoxo ne-interlocutor ongayithandanga nganoma yisiphi isikhathi.
Akukhathalekile ukuthi ukhulume isikhathi esingakanani nomxhumanisi, uma ungamthandi, ungacindezela inkinobho ekhethekile nganoma yisiphi isikhathi bese uya komunye umlingani wezokuxhumana.
Kungcono ngekhamera yewebhu
Ukuxhumana nekhamera yewebhu kukuvulela amathuba angenamkhawulo. Umbono obonakalayo we-interlocutor ukuvumela ukuthi uzulazule masinyane ekukhetheni kwesihloko okuzodingidwa kuso. Isibonelo, uma isibalo se-interlocutor sibonisa ukuthi ubambe iqhaza kwezemidlalo, isihloko sokuxhumana sesivele sitholakele.
Kulezo zimo lapho owesilisa efuna intombazane, ngokwemvelo ngeke axhumane nowesilisa futhi ngokushesha azoya komunye umkhulumeli wesifazane ozoba nentshisekelo kuye.
Njengoba ukwazi ukubona, ingxoxo yevidiyo ye-roulette inenani elikhulu lezinzuzo futhi iletha izinto eziningi eziwusizo kubasebenzisi bayo. Ungaphuthelwa yithuba lokungena ezweni elimangalisayo nelomlingo wengxoxo yevidiyo.
I-roulette yengxoxo yevidiyo ngaphandle kwemingcele
I-roulette yengxoxo yevidiyo ingenye yezinsizakalo zokuxhumana ezithandwa kakhulu, ezidalelwe ngqo ukuxhumana bukhoma namantombazane nabafana, abesifazane nabesilisa emhlabeni jikelele. Kule ngxoxo eku-inthanethi unethuba lokwenza ojwayelene nabo, uqale ubudlelwano bezothando, uthole abangane abasha, uthole okukhanyayo nokukhohlwayo okuvela ekuxhumaneni okuhle nabantu abathandekayo nabangajwayelekile. Into ebaluleke kakhulu ukuthi le yingxoxo engaziwa ngokuphelele futhi yonke into lapha imahhala ngokuphelele futhi ngaphandle kokubhaliswa.
Ngenxa emisha yesimanje, ukuxhumana ngevidiyo kube lula kakhulu. Ngemuva kwakho konke, uma i-smartphone yakho “iseduze” njengenjwayelo, uzohlala uxhumene njalo, okusho ukuthi, yiba online. Ngaphezu kwalokho, izokunikeza amandla okufaka kalula i-roulette yengxoxo yevidiyo kusuka efonini yakho kunoma iyiphi indawo ekulungele ngaphandle kwemingcele yesikhathi.
Etafuleni elingezansi ungabona izibalo zokusetshenziswa kwamadivayisi ahlukene ngabasebenzisi be-chateek.com. Esibonelweni esinikeziwe, inani lokuvakashelwa kule ngxoxo yevidiyo kusetshenziswa amathebulethi, omakhalekhukhwini kanye namakhompyutha esikhathini sanyanga zonke kuthathwa njengesisekelo.
Uhlobo lwedivayisi / Izibalo zokuvakasha Isabelo sezivakashi ngo-% ratio Isikhathi esimaphakathi kusayithi (imin.)
Ama-Smartphones 64.33 % 5:14
Amathebulethi 2.95 % 2:33
Azikho izithiyo ku-roulette yengxoxo! Ungaxoxa umuntu nomuntu nomunye umuntu okhulumisana naye, ongabonakala ngekhamera yewebhu. Le sevisi inikeza ukuxhumana okusheshayo kubantu ongabazi abangahleliwe abavela kuwo wonke umhlaba. Laba ngabantu bonke abehlukene, uhlelo oluzokukhetha bona ngokuzenzekelayo nge-algorithm engahleliwe.
I-roulette yengxoxo yevidiyo iyi-analogue yamahhala yaseRussia yeChatroulette, edumile e-USA. Okukhulu kakhulu ukuthi abasebenzisi abaningi abakhuluma isiRussia bayatholakala engxoxweni yaseRussia amahora angama-24 ngosuku: imini nobusuku. Ngakho-ke, kunalokho, zenze ukhululeke bese uya kuroulette yethu kusuka efonini noma kukhompyutha yakho bese uqala ukuxoxa khona manje. Ngemuva kwakho konke, amantombazane nabafana abangaphezu kuka-1000 sebevele bakulindile.
Izincomo zokuxhumana ku-roulette yengxoxo
Nazi izinto ezi- 5 okufanele uzicabangele lapho uxhumana nalolu hlobo lwengxoxo :
Nganoma yimuphi umzuzwana, umxhumanisi wakho angaqeda ingxoxo ngaphandle kokusho ngisho nokuvalelisa - lokhu kuvamile ku-roulette yengxoxo.
Abafana babhekene nomsebenzi onzima: ngokoqobo ngemizuzwana emi-5 ukuthakazelisa intombazane, ukuze ingacindezeli inkinobho "Okulandelayo".
Kunabasebenzisi besifazane abambalwa kakhulu ezingxoxweni ezinjalo - ama-30% kuphela, ngakho-ke ukufuna umlingani ophelele kungathatha isikhathi eside.
Amantombazane ase-Ukraine naseBelarus anobungani futhi avulekele izingxoxo.
Nakekela ukubukeka kwakho, ngoba lesi yisona sizathu esikhulu sokwenqaba komuntu ukuhlangana nawe.
Imithetho kule ngxoxo yevidiyo ilula: cindezela inkinobho bese ubheka kulowo okubukayo. Uma umlingani wakho ekhombisa okuthile okungavunyelwe, vele wenqabe ukuxhumana naye. Ingxoxo yethu ithola ngokuzenzakalela abasebenzisi "abahle" "nabangalungile". Ngakho-ke, uma ufuna ukuba nengxoxo emnandi, qiniseka ukuthi ubuso bakho bubonakala kahle futhi uhlelo luzokukhethela abakhulumeli abafanele!
Siyethemba ukuthi lolu lwazi luzokusiza ekutholeni abangane abasha ku-roulette yengxoxo futhi uzokujabulela ngempela ukuxhumana nabantu abasha.
Uke wezwa ngeChatroulette noma i-Omegle? Wake wayisebenzisa ingxoxo yevidiyo phambilini? Uma uthanda ukuxoxa ngevidiyo futhi ufuna ingxoxo enhle ye-webcam, umbhalo noma ingxoxo yomsindo, iChateek.com ikunikeza ukufinyelela kuzo zonke izindlela ezingcono kakhulu ezingamasayithi afana ne-Omegle neChatroulette. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uhlangane nabantu abavela kuwo wonke umhlaba online. Uma kwenzeka ungenantshisekelo kumlingani wakho wengxoxo, konke okudingeka ukwenze chofoza inkinobho "Okulandelayo" futhi uzoxhunyaniswa nomunye umuntu. I-roulette yengxoxo ikuvumela ukuba ube nengxoxo nabantu ongabazi kusukela ngesikhathi enibonana ngaso ewindini lekhamera yewebhu. Insizakalo yethu ikunikeza uhlobo oluthile lwefomu lokuphola ngejubane lapho ungaxhuma khona nabantu ongabazi abangahleliwe ngokutshala isikhathi okuncane. Lokhu yikho okwenza lolu hlobo lokuqomisana luhluke. Khumbulaukuthi le yingxoxo engahleliwe ongayifinyelela ngokushesha, ngaphandle kokufaka imininingwane yakho.
Ingxoxo yevidiyo esheshayo - ukuxhumana okulula
Yini ongayilindela ezingxoxweni zevidiyo ezisheshayo ku-Chateek.com? Uma ufuna ukuhlangana nabantu abasha futhi ubabone nge-webcam yakho, le yindawo enhle yokwenza. I-Chateek.com ikulethela izingxoxo eziningi - izingxoxo ezingahleliwe ezenziwa nge-inthanethi zisebenzisa ikhamera, imakrofoni nokuxoxa ngombhalo mahhala! Lapha ungaba nengxoxo emnandi nabantu ongabazi, uthole abangane abamangalisayo nabalingani bezothando. Ngakho-ke, uma ufuna ukuxhumana nabanye abantu, ingxoxo yevidiyo esheshayo izokusiza uthole okudingayo.
Ungazithola kanjani ezinye izinhlobo zeroulette yengxoxo?
Ungazama ezinye izinhlobo zeroulette yengxoxo ngqo kuwebhusayithi yethu. Iya ekhasini eliyinhloko bese ukhetha ingxoxo oyithandile. Noma sebenzisa imenyu yokuzulazula. Awudingi ukulanda izinhlelo zokusebenza kwikhompyutha yakho noma ifoni bese uhlunga iphrofayili. Ngokuqinisekile uzothola abantu abahle futhi abajabule engxoxweni.
Inzuzo enkulu kuwe yikhamera yevidiyo efakiwe, lapho uzoba nethuba elingcono lokuxoxa nabantu ongabazi okungahleliwe, ngoba nabo banesifiso sokubona abakhulumisana nabo. Lapho yonke into isilungele ingxoxo, vele ucindezele inkinobho "Qala" bese uhlelo luzosesha ngokushesha abakhulumeli bese lukuxhumanisa nomlingani ngendlela engahleliwe. Uma kwenzeka unganelisekile ngophathina okhethiwe, vele uye kumlingani olandelayo, mhlawumbe uzokwazi ukuhambisana nezinketho zakho.
Uma ufuna ukuba ngomunye wabokuqala ukwazi ngezingxoxo ezintsha, bhalisela izindaba zethu ku-twitter.